de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF)
Managua, 14 April 2021
Leader of the Zimbabwe African National Union - Patriotic Front (ZANU-PF)
On the special occasion of commemorating on 18 April the 41 Anniversary of the Independence of the Republic of Zimbabwe, we are proud to convey our most sincere congratulations on behalf of the People and Government of Reconciliation and National Unity of the Republic of Nicaragua.
Zimbabwe and Nicaragua share historical bonds of revolutionary struggle and victory, as well as the unwavering aspiration to overcome the scourge of poverty.
On this memorable and historic date, we take the opportunity to convey our appreciation for the achievements of the Government of the Republic of Zimbabwe, under your firm and decisive leadership.
With the certainty that unity is the way to advance towards the future, we convey our best wishes for the strengthening of the Fraternal relations of Solidarity that unite Nicaragua and Zimbabwe, which are based on Solidarity, Mutual Respect and Friendly Cooperation.
From our Nicaragua, Always Blessed and Always Free, receive our Fraternal and Revolutionary
Embrace, as well as the affection of the Nicaraguan People for the Brotherly People of Zimbabwe.